အခု WhatsApp! +66 94 635 76 37
ပင်မစာမျက်နှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် HGH ထုတ်ကုန်များ - လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်း (HGH), ဆေးထိုးဘို့အမြုံ Somatropin HGH Genotropin GoQuick 12mg 36 IU (လက်မှတ် + ဆေးညွှန်းလက်မှတ်အခမဲ့!)
HGH Genotropin GoQuick 12mg 36 IU (လက်မှတ် + ဆေးညွှန်းလက်မှတ်အခမဲ့!)
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် 2%
မူရင်းစျေး 16,400 ฿
လက်ရှိစျေးနှုန်း 16,000 ฿
ထိုင်း - ၁ ကလောင် (Pfizer ဘယ်လ်ဂျီယံ) အပ်များ + အအေး - အိတ်ဆောင် - အခမဲ့! - ၁၆၀၀၀ ฿ ထိုင်းနိုင်ငံ - Pens ၂ ခု (Pfizer ဘယ်လ်ဂျီယံ) အပ်များ + အအေးအိတ် - အခမဲ့! - ၃၀,၈၀၀ ฿ ထိုင်းနိုင်ငံ - Pens ၂ ခု (Pfizer ဘယ်လ်ဂျီယံ) အပ်များ + အအေးအိတ် - အခမဲ့! - ၃၀,၈၀၀ ฿ ထိုင်းနိုင်ငံ - Pens ၂ ခု (Pfizer ဘယ်လ်ဂျီယံ) အပ်များ + အအေးအိတ် - အခမဲ့! - ၃၀,၈၀၀ ฿ ထိုင်းနိုင်ငံ - Pens ၂ ခု (Pfizer ဘယ်လ်ဂျီယံ) အပ်များ + အအေးအိတ် - အခမဲ့! - ၃၀,၈၀၀ ฿
ထိုင်း - ၁ ကလောင် (Pfizer ဘယ်လ်ဂျီယံ) အပ်များ + အအေး - အိတ်ဆောင် - အခမဲ့! ထိုင်းနိုင်ငံ - Pens ၂ ခု (Pfizer ဘယ်လ်ဂျီယံ) အပ်များ + အအေးအိတ် - အခမဲ့! ထိုင်းနိုင်ငံ - Pens ၂ ခု (Pfizer ဘယ်လ်ဂျီယံ) အပ်များ + အအေးအိတ် - အခမဲ့! ထိုင်းနိုင်ငံ - Pens ၂ ခု (Pfizer ဘယ်လ်ဂျီယံ) အပ်များ + အအေးအိတ် - အခမဲ့! ထိုင်းနိုင်ငံ - Pens ၂ ခု (Pfizer ဘယ်လ်ဂျီယံ) အပ်များ + အအေးအိတ် - အခမဲ့! ပြည့်စုံစုံကိုရွေးချယ်ပါ။